Maxaa Haaraha Dawo U Ah? - Daryeel Magazine
Maxaa Haaraha Dawo U Ah?
mawduuceennu manta waxa weeye maxaa sababay haaraha wajiga maxaasse dabiici ah oo lagu dawwayn karaa?
Markahore aan kuhormaro hordhac yar oo ah waamaxay haaruhu:
Haaruhu waa goobaabin kamidab badalan jirka intiissa kale waxayna kasoo bixi kartaa meelkasta oo oo qofka jirkiissa kamid ah balse wajiga ayaa ugu badan khaas ahaan dhabbannada .
Dhawr arrimo ayaa sabab uah waxaa kamid ah :
Qofka oo waxbadan qorrax ay kudhacday jirkiissa waliba qorraxda kadanbaysa duhurkii waa’yo waxaa kubadan wax looyaqaan (UV) waxay ukeenaysaa in jirka biyihiisa kadhammaadaan sidoo kale waxay dilaysa maadada Alle inoo abuuray oo masuulka ka ah jirka midabeenteeda iyo sidoo kale waxay dilaysaa qorraxdaassi maadada (collagen) oo ah Protein jirkeenna uusoo daayo qaabilsan qurxinta maqaarkeenna .
Qofka oo isticmaalay kareem gubay jirkiissa kareem kaasoo u waxyeeleeye sida aan qorraxduba kusoo sheegay.
Qofka oo laga yaabo in uu jiro xanuun xagga caloosha ah ama ay hayso nafaqo darro aad udaran.
Intaa kadib maxaa dawwo u ah?
Walaalayaal dadku isku jir maaha qofba wax ayuu isbaddal wayn oo durba ah kaheli karaa waxyaabaha lagu dawwayn karo haaraha waxaa kamida sidan soo socotta:
-Koow waa in uu ogaada sababta ukeentay haaraha kaddibna joojiyaa ama kahortag layimaadaa sida qorraxda oo loo baxo duhurkii qofkii kukhasban waa in uu isticmaalaa (organic sesame oil), waa saliid macsar ah oo nadiif ah aan innaba wax kukhaldaneen sidoo kale aan kiimiko badan lagasoo abuurin mirta sisinta oo saliidda laga dhaliye,waxaa la arkaa dadku inay layaabaan urkeeda laakin waxa aad kamarsanaysan waxbadan maaha walaalayaal waa in aad uyar sidoo kale cream waxaa jira oo anfacaya qofkii haaruhu kudaranyihiin wuxuu marsanayaa marka uu qorraxda ubaxayo meel dheer waxaa layiraahdaa (Sudocream ) waxaa loo isticmaalaa kollay dad badan waa garan doonaan caruurta eczema ama cambaarta qabta iyo caruurta xafaayadda kuhuuray oo kasoo bexeen rash waxa looyaqaan.
Intaa aan soo sheegay waa qaabkii qorraxda looga diffaac gali lahaa ,waxaan idin qorayaa mask kamid ah kuwa anfaca oo baab’iya haaraha bi idnillaah laakin waa in qofka uu joogteeyaa marka hore.
1 qaaddo lawska budadiissa LAWSKA AAN SHEEGAYO WAA ALMOND MIDKA LOOYAQAAN waxaa lagu darayaa 1 qaaddo caano boore ah kadib waxaa lagu qassayaa biyo lakarkariye oo kaddib la dhex dhigay caleenta kabsarta ueg layiraahdo baqduunis ama looyaqaan (Parsley). (FADLAN HAKARKARIN CALEENTA SI NAFAQADEEDA UDHAMMAAN) waxaa lagu darayaa qaaddo yar castor oil saliidda somaliga looyaqaan( OOLYO oo urka kulul leh loona cabbo badanaa caloosha inay kusocotto qofka).
Wuxuu marsanaanayaa qofka muddo 20 daqiiqo kaddib marka uu iska dhaqo wuxuu dareemaya wajiga in uu subag yahay (wax sabuuna wajiga hataabsiin)isla markaas walaalshey adiga oo aan qallajin wajiga waxaa soo qaadaysaa sonkorta budada aadka ah aan waawayneen waxaa kuxoqqaysa si tartiib aaad ah kafiirsasho leh meelaha aadka kuu mad madoow kana ilaali indhaha hoostooda aad bay meeshaa ujilicsantahay haxoqqin halkaa walaal. Muddo 2 daqiiqo camal ah ayuu soonkorta kuxoqayaa kaddib biya caadi ah ayuu kudhaqanayaa wajiga .
Qofkii daa’ima sameeya maalin waliba 1 mar muddo 3 week waxbadan ayaa iska badali doona inshAllaah haddaane kab’in gabi ahaan .
Waxaan rajjaynayaa inaad kafaa’idaysatteen, waxaan walaalahay jooga waddankii filayaa inay suurta gal unoqon doonin inay helaan waxyaabo badan aan soo qoray haddee sidaa noqotto way iisoo sheegi karaan waxaan isku dayaya inaan mask goonni ah iyaga anfacaya una fudud inay helaan ugu soo badalo bi idnillaah ..jazaakumullaah khayr.
Faatii Maxamed Cismaan
Maxaa Keena Cambaarta? Maxaa keena Dhiiga Ka Yimaada Gabadha Uurka Leh? Dawo Guri Caawinaysa Gabadha Timuhu Ka Daataan Waxtarka Sisinta (WAA DAWO QIIMO BADAN)